Yaa’iin Hooggantoota ATGO...
Latest News Yaa’iin Hooggantoota ATGO...
Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur.2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Daarekterri Olaanaan Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Obbo Ahimad Tusaa hirmaattota waltajjichaaf gabaasa raawwii karoora hojii hanga kurmaana 2ffaa bara baajataa 2009 kan dhiyeessan yammuu ta’u raawwiin sassaabbii galii gadi bu’aa akka ta’e ibsameera. Sababa raawwii gadi buusan keessaa; jalqabarra kaasee boqonnaa qophii gahaan taasifamuu dhabuu, hordoffii fi deggarsi laafaa ta’uu, xiyyeeffannoo fi kutannoon hooggansa bilchina qabu kennuu dhabuun akka rakkoolee ijootti adda bahaniru. Akka naannoo keenyaatti sababoota adda addaa irraa kan ka’e bara 2003 as haala walfakkaatuun tilmaamni galii guyyaa waan hingaggeeffamneeftilmaama galii guyyaa kaffaltoota gibiraa karaa haqa qabeessa, amanamaa fi hirmaachisaa ta’een gaggeessuuf akka naannootti qophii gahaan taasifamaa jira. Hirmaattonnis hubannoo argatanii qophii gochuun tilmaamni galii guyyaa haala qulqullina qabuun akka gaggeeffamuuf wixineen qajeelfamaa hojimaata tilmaama galii guyyaa bara 2009 karaa Daarektera Daayrektoreetii Murtii,Hordoffii fi Sassaabbii Galii ATGO Obbo Abdiisaa Dhufeeraa dhiyaatee irratti mari’atameera. Tilmaamni galii guyyaa kaffaltoota gibiraa bara kana(2009) gaggeeffamu kan yeroo kami caalaa iyyuu xiyyeeffannoo guddaan kan hoogganamuu fi raawwatamuu qabu akka ta’e ibsameera. Akkaatuma kanaan raawwachuuf qophiin barbaachisaa ta’e hunduu akka taasifamuu fi hirmaattonni waltajjichaas komiin kaffaltoota gibiraa dhima kanaan walqabatee bal’inaan kan jiru waan ta’eef rakkoo bulchiinsa gaarii gama kanaan jiru furuu fi haqa qabeessummaa gibiraa/taaksii mirkaneessuun walitti dhufeenya kaffaltoota gibiraa fi sektera kan galii kan cimsu waan ta’eef amuma irraa eegalanii qophii barbaachisaa ta’e gochuun xiyyeeffannoon kan hojjatan ta’uu mirkaneessaniiru.